Mampiato ny Servisin’ny Kaonsiliny any Etazonia i Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2013 15:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, Français, فارسی, Español
Sampan'ny tombontsoa Kiobana ao amin'ny Ambasady Soisa, Washington D.C. sary nalaina avy ao amin'ny Wikimedia Commons, ambany fahazoan-dalana CC.
Nanambara ny fampiatoan'ny servisy (fikarakarana) ataon'ny kaonsiliny ao Etazonia ny Sampan'ny Tombontsoa Kiobàna ao Etazonia noho ny tsy fahafahan'ny banky iray hikarakara ny kaontiny ao amin'ny firenena, hoy ny afampitan-kafatra ofisialy [es] nivoaka tao amin'ny Cubadebate [es].
Nanambara tamin'ny Sampan'ny Tombontsoa Kiobàna ny banky M&T tamin'ny 12 jolay fa tsy hikarakara intsony ny iraka diplaomatika eo amin'ny sehatry ny raharaham-bahiny, izay nanery ny Sampan'ny Tombontsoa Kiobana sy ny Iraka maharitra eo anivon'ny Firenena Mikambana hamarana ny fifandraisan'izy ireo ka hitadiavany banky hafa ahafahany miasa ao anatin'ny fotoana voafetra.
Na izany aza,
hatramin'izao, noho ny sakantsakana avy amin'ny politikan’Ankivy ara-toekarena ara-barotra, ary ara-bola ataon'ny governemantan’ Amerika Avaratra ho anoherana an'i Kiobà [es], dia tena tsy azon'ny Sampan'ny Tombontsoa velively ny nitady banky vahiny na amerikana hikarakara ny kanty bankin'ny Iraka Diplaomatika KIobàna, na teo aza ny ezaka maro samihafa nataon'ny departemantam-panjakana sy ny banky isankarazany.
Vokatr'izany nampiato ny servisin'ny kaonsily ny Sampan'ny Tombontsoa Kiobàna mandra-pisian'ny filazana manaraka. Araka ny filazana ofisialy, “ny fikarakarana hamonjena ny mahaolobelona ihany,sy ny hafa ao anatin'ny isan'olona voafetra,no ho voakarakara.”
Araka ny Dinan'i Vienna eo amin'ny Fifandraisana Diplaomatika, nitsangana tamin'ny 18 Aprily 1961, sy ny Dinan'i Vienna momba ny Fifandraisana ara-kaonsily, nitsangana tamin'ny 24 April 1963, dia voasoratra fa “Ny Fanjakana mandray no tsy maintsy manome ny fitaovana rehetra ilain'ny iraka diplaomatika, ka tafiditra amin'izany ny biraon'ny kaonsily ahafahany mamita ny asany.”
Tamin'ny 30 May 1977 i Kiobà sy i Etazonia no nanasonia fifanarahana mametraka ny sampana tombontsoa eo amin'ny firenena toa tonta, ho fanatanterahana “eo amin'ny roa tonta ny manamafy ny fanatontosan'izy roa ny taratasin'ny fifanarahana iraisampirenena mifehy ny fifandraisana kaonsilary sy diplaomatika.”
Hisy fiantraikany any amin'ny olom-pirenena Kiobana sy ny avy ao Etazonia ny fampiatoana ny servisin'ny kaonsily, noho ny tsy fahafaha-mamita fanaovan-taratasy tahaka ny famoahana pasipaoro, visas, antota-taratasy misy sonian'ny manampahefana, ary ny servisy hafa. Ankoatra izany, hisy ihany koa ny fiantraikany ratsy momba ny fitsidihana fianakaviana, sy ny fifanakalozana akademika, ara-kolontsaina, ara-panabeazana, siantifika, ary ara-panatanjahantena na izany endrika hafa eo amin'i Etazonia sy i Kiobà.